त्यसैले आज हामी "यस Sims 3" गर्न एडअनहरू स्थापना गर्न कसरी बारेमा कुरा हुनेछ। सामान्य मा, त्यहाँ जो खेलबाट नवाचारै "अपडेट" र समावेश विभिन्न स्वरूप छन्। प्रत्येक यसको आफ्नै तरिका छ। गरेको चाँडै "यस Sims 3" कसरी स्थापना गर्न सिक्न गरौं। पनि एक बच्चा कार्य सामना गर्न सकून् भनेर स्थापना निर्देशन र "यस Sims", एकदम सरल छ।
ठीक छ, हामी भेट कोसँग पहिलो ढाँचा, - यो प्याकेज एडअन। शायद, हामी तिनीहरूलाई सजिलो गर्नेछन्। यो कहिल्यै "Sims" (उदाहरणका लागि, मा Sims 2) विभिन्न पूर्वनिर्धारित उपलब्ध नभएका नवाचारै मा स्थापित भएकाहरूलाई विशेष साँचो हो।
यो कुरा तपाईं कसरी "यस Sims 3" गर्न एडअनहरू स्थापना गर्न सोच छ भने, र छ फाइल ढाँचा तपाईं प्याकेज, तपाईं बस तान्नुहोस् र mods फोल्डर मा डाउनलोड वस्तुहरू सबै ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई "मेरो दस्तावेज" मा स्थित छ। यस Sims3मा पालना त्यहाँबाट जब आफैलाई mods पाउन, सिर्जना वा प्याकेजहरू पत्ता लगाउन। यो ढाँचामा सबै थपिएको तान्नुहोस्।
साथै, तपाईंले कसरी "Sims 3" गर्न एडअनहरू स्थापना गर्न सोच छ भने, त्यसपछि तपाईं डाउनलोड र mods Resource.cfg भनिने फाइल फोल्डर मा फेंक छ छौँ। यो बिना दुर्भाग्य, प्याकेज स्थापना गर्न सक्षम हुने छैन। साधारणतया सबै छ। अब तपाईं खेल सञ्चालन र थपिएको आनन्द उठाउन सक्छौं।
तर, कहिलेकाहीं केही खेलाडीहरू खिलौना तथाकथित फाइल सम्पादक सिम बनाउन मा "खन्याउनु" गर्न चाहन्छु। यी समावेश: मेकअप, छाला रंग, लुगा, आँखा, नाक, eyebrows, ओठ, र यति मा। सामान्य मा, सबै नयाँ खेल चरित्र सिर्जना गर्दा मात्र पाउन सकिन्छ।
तथापि, यहाँ एउटा सानो समस्या छ। जब "zakidyvanii" यी प्याकेजमा थपिएको, केही हुन्छ। त्यसैले फरक दृष्टिकोण छ। के गर्न सकिन्छ विचार गरौं।
कसरी सिम ढाँचामा थपिएको गर्न "Sims 3" स्थापना गर्न? यो नै "मेरो दस्तावेज" जान हुनेछ, र अब केवल बाबाले भनिन्छ SavedSims फाइलहरू तान्न गर्नुभएको Sims3मा जानुहोस् त्यहाँ बाट। यो छैन? त्यसपछि बस सिर्जना गर्नुहोस्। केही जटिल वा अस्पष्ट। तथापि, तपाईं मात्र यी थपिएको एक जोडी छ भने, तपाईं परियोजना मा डबल-क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ - स्वतः आवश्यक जहाँ स्थापना हुनेछ। छैन सबै भन्दा राम्रो विकल्प, तपाईं अद्यावधिक धेरै "भर्न" निर्णय विशेष गरी भने।
खैर, अब तपाईँलाई add-मा sims3pack ढाँचा कसरी स्थापना गर्न Sims3यो सबैभन्दा लोकप्रिय विस्तार, अक्सर खेलाडीहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ जो बुझ्न प्राप्त गर्न प्रयास गरौं।
पहिलो विकल्प - यो फाइल मा एक डबल-क्लिक छ। स्वचालित रूपमा स्थापित गर्न सक्षम छ जो एक विशेष फाइल, हो - कुरा Sim3pack छ। एउटा राम्रो तरिका, हुनत त्यो फिट मात्र केही फाइलहरू छ। र के तपाईं नवाचारै को धेरै अपलोड गर्न आवश्यक भएमा?
दोस्रो विधि - यो सबै एउटै तानेर छ र ड्रप स्वयं फाइलहरू। तपाईं कसरी "Sims 3" sim3pack ढाँचामा एडअनहरू स्थापना गर्न लाग्छ? त्यसपछि फेरि "मेरो दस्तावेज" पछ्याउने र त्यसपछि - यस Sims3मा (राम्रो वा सिर्जना) फेला पार्न त्यहाँ फोल्डर डाउनलोड हामी अब छ। यो सबै थपिएको तान्नुहोस्। यो सबै कुरा देखिन्छ - काम गरेको छ। तर कुनै। त्यहाँ खातामा लग्नु गर्नुपर्छ जो अर्को विन्दु हो।
स्थापित एडअनहरू गर्न पनि विशेष कार्यक्रम प्रशोधन गर्न सकिन्छ काम गर्न। यो Sims3Launcher भनिन्छ गर्नुपर्छ। यसको सुरुवात पछि तपाईं डाउनलोड मा तान्नुभयो के को सूची हेर्न हुनेछ। यो आवश्यक वस्तुहरु चेकमार्क र त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् मात्र रहन्छ "स्थापना गर्नुहोस्।" एक क्षण प्रतीक्षा - र तपाईंले खेल सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
तर, यो पनि Sims "गोधूलि" वा जस्तै 3. केहि पूरक आफैलाई खेल केही "भाग" सेट गर्न रूपमा चाहेको हुन्छ "कुराको सूचि।" यो स्थितिमा हामी सामग्री यस प्रकारको कसरी स्थापना गर्न विचार छ।
यो कुरा "भागहरु" कम्प्युटर स्वचालित रूपमा राख्न छन् भन्ने छ। थप ठीक, स्थापना हामीलाई परिचित प्रयोग गरेर। रूपमा सामान्य खेल हो। तर, यी "निर्देशिका" राख्न एक खेलौना संग फोल्डर मा दायाँ खेल केही नयाँ देखा पर्छ हुनुपर्छ The Sims3अन्यथा,।
डिस्क सम्मिलित गर्नुहोस्, र त्यसपछि स्थापना निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। प्रक्रिया पूरा भएपछि कम्प्युटर पुनः सुरु र खेल सुरु गर्नुहोस्। सबै छ। अब तपाईं आनन्द उठाउन सक्छौं - तपाईं कसरी सबै हालतमा पनि "Sims 3" गर्न एडअनहरू स्थापना गर्न थाहा छ।
टी-62A। ट्यांक को विश्व: टी-62A। विनिर्देशों, फोटो
को पुनर्जागरण को वर्ष। को पुनर्जागरण को सामान्य विशेषताहरु
"Givenchy" लिपस्टिक: वर्णन, रंग, प्यालेट, दृश्य र समीक्षा
घर sausages: नुस्खा